Ciidanka booliska Soomaaliya oo lasiinayo tababaro lagu tayeynayo xirfaddooda. – Radio Daljir
Luulyo 8, 2016 3:45 b 0
(July 08 2016)-Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya oo dhammaadka sanadkaan waqtigeedu ku egyahay ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabayso tababaro lagu tayeynayo ciidanka xooga dalka Soomaaliya.
Cabdirisaaq Cumar Maxamed, wasiirka amniga Soomaaliya ayaa sheegay tababarkan la siinayo boliiska in ay muhiim u tahay amniga dalka, si looga hortago falalka amin daro ee ururka Al-shabaab ay mararka qaar ka geystaan magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in ujeedka tababar loosiinayo ciidamada uu yahay sidii Al-shabaab looga saari lahaa deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka.
Ciidamada boliiska Soomaaliya ayaa inta badan waxaa tababaro ay ku soo qaataan dalka dibadiisa iyo sidoo kale gudaha magaalada Muqdisho, waxaana ay dowladda Soomaaliya wali ay wadaa ka hortaga weerarada Alshabaab oo Muqdisho kaliya laga sifayn waayey.